Wacaal Daray ah: Nabadoon Caawa Gaalkacyo lagu Dilay – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Nabadoon Caawa Gaalkacyo lagu Dilay
Abriil 27, 2017 7:21 g 0
Gaalkacyo – Alle ha u naxariistew nabaddoon Maxamuud Jamac Diirshe oo ku magac dheeraa Maxamuud Farey ayaa caawa oo Khamiis ah lagu dilay magaalada Galkacyo.
Nabaddoonka waxaa toogtay rag baskoolado ku hubaysnaa, kuwaasi oo baxsaday isla markiiba sida ay Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa oo aan la xiriirnay iyo masuuliyiin maamulka degmada ah.
Dilka ayaa ka dhacay afaafka hore ee gurigii uu degganaa nabaddoonku oo ku yaalla aggagaarka meesha loo yaqaanno Jiirogaroob oo ah cirifka waqooyi ee xaafadda Garsooor ee magaalada Galkacyo.
Sida naloo xaqiijiyey nabaddoonka waxaa lagu dhax dilay gaarigii uu watay oo hortaagnaa gurigiisa, isagoo markaasi doonayey in uu ka degto, mana jirto cid illaa hadda laamaha amnigu u qabteen falkaasi hase ahaatee ciidanka booliska ayaa tagey goobta dilku ka dhacay, hawlgallo baaritaanna ka bilaabay xaafaddaasi.
Inkasta oo amniga magaalada Galkacyo u muuqday mid soo hagaagayay muddooyinkii dambe, misna dhawr jeer oo kala dambeeyey ayaa falal dil ah oo midka caawa dhacay la mid ah ay ka dhaceen magaalada wixii ka dambeeyey weeraradii mataanaha ahaa ee baabuurta miinaysan loo adeegsaday ee sannadkii hore lagu qaaday xarunta dawladda hoose iyo suuqa ganacsiga ee Dayax.